FMI ကုမ္ပဏီလီမိတက် စင်ကာပူစတော့အိတ်ချိန်းတွင် ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့် မြန်မာကုမ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁-ဖက်စ် မြန်မာ အင်ဗက်စ်မဲ့(န်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်(FMI)သည် ယင်းနှင့်အကျိုးတူပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ရှယ်ယာထည့်ဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စင်ကာပူ စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
FMI သည် ၄င်းနှင့်အကျိုး တူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော Yoma Stra- tegic Holdings(YSH) နှင့် Exemplary Venture Ltd(EVL) ကုမ္ပဏီတို့နှင့်အတူခရီးသွားလုပ်ငန်း၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် MM Myanmar Pte., Ltd တွင် ထည့် ဝင်ထားသော ၄င်းတို့အားလုံး၏ ရှယ်ယာထည့်ဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စင်ကာပူစတော့အိတ်ချိန်းဝင်ကုမ္ပဏီ SHC Capital Asia Ltd (SHC) သို့ လွှဲပြောင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုအတွက် FMI ကုမ္ပဏီ၊ YSH ၏ရာနှုန်းပြည့်ပိုင်လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီ Yoma Strategic Investment Ltd နှင့် EVL ကုမ္ပဏီများ သို့ SHC Capital Asia Ltd ကို ၈၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်မည့် သာမန် အစုရှယ်ယာသစ်များထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ပေးချေသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ယင်းသတင်းထုတ်ပြန် ချက်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်။
FMI ကုမ္ပဏီသည် SHC ၏ ၁၃ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင် လာမည်ဖြစ်ပြီးရှယ်ယာလွှဲပြောင်း မှုများပြီးစီးချိန်၌ SHC ကို Memories Group Limited (Memories Group) အဖြစ် အမည်ပြောင်း လဲသတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
Memories Group သည် စင်ကာပူစတော့အိတ်ချိန်းရှိ Catalist Board တွင် စာရင်းဝင်နိုင်ရန် အများပြည်သူများထံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အစုရှယ်ယာအသစ် များကို ထုတ်ဝေရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းရှယ်ယာများရောင်းချ ပြီးချိန် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင်Memories Group သည် စင်ကာပူစတော့အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာမည်ဖြစ် ကြောင်း FMI ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Memories Group ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးသိမ်းဝေ(ခ) Mr.Serge Pun၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Michel Novatin နှင့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Jean Michel Romon တို့က ဦးဆောင် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး Memories Group ၏စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးသိမ်းဝေက”မြန်မာကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေ နဲ့အခုလိုပြည်ပနိုင်ငံစတော့အိတ် ချိန်းစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရုံသာမက အဲဒီ ကုမ္ပဏီရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်း ကဏ္ဍများမှာ တာဝန်ယူဆောင် ရွက်ရခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြု လုပ်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထပ်ဝင် ရောက်လာဖို့မှာ အထောက်အကူ ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောခဲ့သည်။
Memories Group ၏ ကနဦးလုပ်ငန်းများတွင် Balloons over Bagan နှင့် Balloons over Inle? Pun Hlaing Lodge ဟိုတယ်၊ Hpa An Lodge ဟိုတယ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဆောက်အအုံ တစ်ခုနှင့် Asia Holiday လုပ် ငန်းများပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
FMI သည်အစုရှယ်ယာဝင် ၈ဝဝဝ ကျော်ရှိသည့်အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ် ပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ်ကကုမ္ပဏီကိုစတင် တည်ထောင်ခဲ့ကာ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် မတ်၂၅ ရက်တွင် ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ် လာခဲ့သည်။
နိုင်ငံအတွင်း ပလတ်စတစ်အိတ် မသုံးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တန်ဇန်းနီးယား သမ္မတ ကိုယ်တိုင် ဝါးခြင??